सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन सम्मानीत हुँदै « News of Nepal
सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन सम्मानीत हुँदै
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक एवं सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनलाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रविधि पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्ने भएको छ ।
कोरोना महामारीको अवधिमा पनि मन्त्रालय नेतृत्व उनीप्रति अनुदार देखिरहेकै छ । अस्पतालमा पनि डा. पुनलाई महत्वपूर्ण भूमीका छैन् ।
कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारलाई क्रस गरेर मिडियासँग बोलेको भन्दै स्पष्टीकरणसहित मन्त्रालयमा तान्ने पत्र काटिसकेपछि जनदबाबसँगै मन्त्रालयले पत्रको व्याहोरा फेरेर छलफलका लागि मात्रै बोलाएको भन्दै पछाडि हटेको थियो ।
मन्त्रालयका अधिकारीसमेत मिडियामा उनीमात्रै छाएको भन्दै डा. पुनलाई आँखी बनाएका थिए । स्वास्थ्य अधिकारीका निम्ति आँखी बनेको काम नास्टका प्राज्ञहरुको मन जितेको छ ।
विश्वमा देखिएका नयाँ पुराना सरुवा रोगको उपचार, अनुसन्धान तथा लेखरचना प्रकाशनमा दख्खल राख्ने डा. पुनले नास्टले पुरस्कृत गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन् ‘शुरुमा सुन्दा त केहि समय विश्वास गर्न गाह्रो भयो, तर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान –(नास्ट)ले प्रविधि पुरस्कार’ जस्तो उच्च तथा प्रख्यात (प्रतिष्ठित) राष्ट्रिय अवार्डद्वारा सम्मान गर्ने निधो गरिएको छ, म अत्यन्त हर्षित भएको छु ।’